बाबुको फोक्सोमा यस्तो रोग । ९ बर्षका छोरा-छोरी रुदै बाबुको जीवनको भिग माग्दै ! ३ करोड नेपाली रुवाउने भिडियो – सुदूरखबर डटकम
बाबुको फोक्सोमा यस्तो रोग । ९ बर्षका छोरा-छोरी रुदै बाबुको जीवनको भिग माग्दै ! ३ करोड नेपाली रुवाउने भिडियो
label sudurkhabar query_builder June, 11 2019
सबैको आशा र बिश्वासको धरोहर शिशिर भण्डारी राकेश योगी बसेको कोठा काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा पुग्ने बित्तिकै कारुणिक दृश्य देखियो । अक्सिजनको पाईप नाममा लाएर आफ्ना ३ छोरा छोरी च्यापेर बसेका योगी रुदै शिशिरलाई अँगाल्न आए । आँशुको धारा बगाउँदै भने, म मर्दैछु मेरो छोरा छोरीको जिम्मा लिईदिनुस ।
त्यो देखेर शिशिर नकै भावुक बने । कलिला नानी बाबुहरुको आफ्नो बाबा स्वस्थ भएको हेर्ने सपना शिशिरले पुरा गर्ने अठोट लिए र ९३ हजार माथिको सहयोग बुझाए । सहयोगका लागि राकेश योगी- ९८६५७७८८३९ शिशिर भण्डारी- ९८११००६९२९ अन्तर्वार्ताकै क्रममा बोल्दा बोल्दै गाह्रो भएपछि राकेश योगीको मुखमा यस्तो मिसिन लाउनु पर्यो हेर्नुहोस